तपाईंको असफल सामग्री मार्केटिंग रणनीति कसरी सुधार गर्ने Martech Zone
तपाईंको असफल सामग्री मार्केटिंग रणनीति कसरी सुधार गर्ने
शनिबार, मे 23, 2015 शनिबार, मे 23, 2015 Douglas Karr
हामीले हालसालै प्रश्न सोधेका थियौं - र वरपर केही परिभाषा प्रदान गर्यौं - चाहे तपाईंको हो सामग्री मार्केटिंग रणनीति उत्पादकता, उपस्थिति, वा निर्माण प्राधिकरणको बारेमा थियो। हामीले देख्ने समस्या भनेको कम्पनियहरु केवल परिणामको विश्लेषण र परिणाम सुधार नगरी हिज्जे सामग्रीमा केन्द्रित छन्।
के पागलपनको परिभाषा बारम्बार एउटै काम गरिरहेको छैन तर बिभिन्न नतीजाहरूको अपेक्षा गर्ने हो? यदि त्यसले तपाईंको सामग्री मार्केटिंग रणनीति परिभाषित गर्दछ भने, तपाईं समस्यामा हुनुहुन्छ र शौचालयमा समय र स्रोतहरू खसाल्नबाट रोक्नु पर्छ। तपाईं मई केहि नतीजाहरू प्राप्त गर्नुहोस्, तर तपाईंलाई लगानीमा धेरै फिर्ताको लागि ड्राइभ गर्ने अवसरले थोरै बढी विश्लेषण र प्रयास लिन्छ।
बाट यो इन्फोग्राफिक ब्राइटएजएक SEO प्लेटफर्म, कसरी प्रभावकारी सामग्री मार्केटि strategy रणनीति सामाजिक र पदोन्नती प्रयासहरूसँग मिलेर केन्द्रित गर्दछ तपाइँको समग्र खोज रैंकिंग वृद्धि.
सामग्री मार्केटिंग अधिकार SEO र तपाईंको ब्रान्डको जागरूकता बढाउन स्मार्ट SEO रणनीतिहरूको साथ काम गर्दछ। राम्रो सामग्री तपाइँको ब्रान्ड को लागी सकारात्मक सम्बन्ध बनाउँदछ। यस गुणस्तरको सामग्रीले तपाईंको कम्पनीलाई खोजी परिणामहरूमा उच्च अधिकारको कारण उच्च श्रेणीमा मद्दत गर्दछ। सुधीर शर्मा
क्रस-च्यानल सामग्री मार्केटि strategy रणनीतिमा, सम्भाव्यता प्राय: एक मध्यमबाट अर्कोमा सर्दछ। उदाहरण को लागी, सामाजिक मिडिया मा साझा तपाइँको सामग्री को लागी जो पनी तपाइँको ब्रान्ड, उत्पादन वा सेवा को लागी पुग्न सक्छ। त्यो तपाइँको साइट मा तिनीहरूलाई ल्याउछ र तिनीहरूले तपाइँको ईमेल न्यूजलेटर को लागी साइन अप गर्दछ। महिना पछि, तिनीहरूले ईमेल मार्फत लेख पढ्छन् र रूपान्तरण गर्ने निर्णय गर्दछ। एक सन्तुलित रणनीति जहाँ तपाईं आफ्नो शीर्षकहरू विश्लेषण, तपाईंको सामग्री योजना, र मापन प्रतिक्रिया ड्राइभ सामग्री प्राधिकरण.
टैग: उज्यालोसामग्री प्राधिकरणसामग्री मार्केटिंग परिणामहरूसामग्री बजार रणनीतिसामग्री पदोन्नतिपदोन्नतिखोज इंजन रैंकिंगएसईओसामाजिक पदोन्नती
स्काईपमा पोडकास्ट साक्षात्कार कसरी रेकर्ड गर्ने